Australian Tax | ShweBiz.com
You are here: Home / Australian Tax
Posted by shwebiz Australian Tax
ဒီအခ်ိန္ဟာ အလုပ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ေပးထားတဲ့ အခြန္ႏွဳန္းက မ်ားသြားရင္ အစိုးရဆီကေန ျပန္ရဖို႔ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေပးသင့္သေလာက္ မေပးရင္ ျပန္ေလ်ာ္ရမယ့္ အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ အခြန္ေငြေတြ ရႏိုင္သေလာက္ ရရွိေအာင္ လူေတြကလည္း အလုပ္အတြက္ ကုန္က်ခဲ့ရတာ မွန္သမွ်ကို ထည့္တြက္ၿပီး အစိုးရဆီက ျပန္အမ္းေငြေတြ ရရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Languageၚ Burmese By Ricardo Goncalves3JUL 2018 – 12:08 AM UPDATED 10 HOURS AGO Australian Taxation Office (ATO) လို႔ေခၚတဲ့ အခြန္ရုံးက ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ဒီကေန႔မွာေတာ့ အလုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး […]
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၇
စာရင်းဇယားထားခြင်း လုပ်ငန်းငယ်များ မအောင်မြင်ရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် စာရင်းဇယားထားသိုမှု ညံ့ဖြင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာရင်းဇယားထားသိုမှု မှန်ကန်ကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့် အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော အချက်များတွင် သင့်အား အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ – သင့်အရောင်းအဝယ်စီးပွာရေးလုပ်ငန်း၏ အခြေအနေကိုသိခြင်း သင့်လုပ်ငန်းက ဘဏ်များ၊ ငွေချေးသူများနှင့် ဝယ်ရန်အလားအလာရှိသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မည်မျှကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသနိုင်ခြင်း နှင့် သင့် စာရင်းကိုင်ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို အနည်းဆုံး ငါးနှစ်တာကာလ သိမ်းဆည်းထားရမည်။ အဆိုပါ စာရင်းဇယားများထဲတွင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။ – ရောင်းချခြင်းများအတွက် ငွေရပြေစာများ၊ ကောင်တာမှ ငွေအဝင်အထွက်မှတ်တမ်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အကြွေးဝယ်ယူသည့် ကတ်ပြားဆိုင်ရာ ပြေစာများ၊ ငွေထည့်သွင်းသည့်မှတ်တမ်းဆိုင်ရာ စာရင်းစာအုပ်များနှင့် ဘဏ်ငွေစာရင်းမှတ်တမ်းများ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးငွေများ၊ အသေးသုံးငွေအတွက် ပြေစာများအပါအဝင် ဝယ်ယူမှုများအတွက် စာရင်းမှတ်တမ်းများ ချက်လက်မှတ်စာအုပ်တွင်ကျန်သည့်အပိုင်းများ နှင့် […]
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၆
အရောင်းအဝယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အခွန်လျှော့ငွေ အကယ်၍ သင်သည် သင့်အရောင်းအဝယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ငွေသုံးစွဲခဲ့ရလျှင် သင့်အနေနှင့် ထိုကုန်ကျငွေကို လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် အခွန်လျော့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ သင်အခွန်ပေးဆောင်ရငွေ လျော့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်းအားဖြင့် နှစ်ခုရှိပါသည်။ ရှေးဦးစွာ သင်က အမှန်တကယ် ငွေသုံးစွဲခဲ့ပြီး သို့မဟုတ် ငွေသုံးစွဲရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပြီးဖြစ်ရမည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ ထိုသုံးစွဲငွေသည် သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တင်ပြနိုင်သော လျှော့ငွေများတွင် အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်များပါဝင်သည် – လုပ်ငန်းအတွက် အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်း သစ်ပင်ပန်းပင်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ ငှားရမ်းခြင်း ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများ အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများအတွက် ကုန်ကျငွေ ချေးငွေများအတွက် အတိုး မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခများ တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုခများ ဘဏ်အသုံးပြုခနှင့် ကျသင့်ငွေများ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် စွမ်းအင် တို့ဖြစ်ကြသည်။
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၅
အကယ်၍ သင့်အလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းများသည် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်သော အလုပ်လက်ခံသူများဖြစ်ခဲ့လျှင် အကယ်၍ သင်က သီးခြားလွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့လျှင် သူတို့အနေနှင့် သူတို့အတွက် PAYG အရစ်ကျ ထည့်သွင်းငွေများကို မိမိတို့ဘာသာ ထည့်သွင်းကြရပေမည်၊ သို့မဟုတ် သင်က သူတို့အတွက် ဖြတ်တောက်ဆုပ်ကိုင်ထားပေးရန် သူတို့၏ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက် ရယူဖို့လိုအပ်ပါမည်။ အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများ၏ ခြားနားချက်ကို သိလိုပါက www.ato.gov.au ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ပြီး အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုကိရိယာ (Employee Contractor Decision Tool) တွင် ကြည့်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၂
သင့်လုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း သင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စတင်ရန် သင် အခွန်စာတွဲနံပါတ် ( TFN ) လိုအပ်ပါသည်။ သင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဩစတြေးလျားနိုင်ငံ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သက်သေခံနံပါတ် (ABN) ရဖို့လည်း လိုအပ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ TFN အခွန်စာတွဲနံပါတ် အခွန်စာတွဲနံပါတ် (Tax File Number – TFN) ဆိုသည်မှာ ATO(Australian Taxation Office) မှ သင့်ကို၊ သို့မဟုတ် သင့်အစုစပ်လုပ်ငန်းကို၊ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းကို သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကိုထုတ်ပေးသောနံပါတ်ဖြစ်သည်။ သင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်ရန်အတွက် TFN လိုအပ်ပါသည်။ အခွန်စာတွဲနံပါတ် TFN သည် ဩစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်သည့် အရေးကြီးသော အထောက်အထားဖြစ်ရာ သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် သင့်ဘဏ်ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို […]
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၄
အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများ ရှိနေပါက အခွန်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် အချက်များ အကယ်၍သင့်မှာ အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်းများ ရှိနေပါက အခွန်ဆိုင်ရာ သင်လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရမည်။ အလုပ်သမားများ၊ဝန်ထမ်းများကို သူတို့ ပထမဆုံးအလုပ်စတင်ချိန်တွင် အခွန်စာတွဲနံပါတ်ကြေငြာချက် (Tax File Number (TFN) declaration) ကို ဖြည့်စွက်ခိုင်းသင့်သည်။ သင့်မှာ အလုပ်သမားများ၊ဝန်ထမ်းများ ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သူတို့၏လစာထဲမှ အခွန်ကို တိကျစွာဖြတ်ပြီး ATO ထံသို့ပေးသွင်းရမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ငွေကိုမပေးဘဲ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း ဟုခေါ်ပြီး ပေးငွေများကို ထုတ်မပေးဘဲ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း (PAYG) စံနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။ သင်က အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်း၏ လစာထဲမှငွေကို မဖြတ်တောက်မီ သင့် အရောင်းအဝယ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းကို ATO တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမား၊ဝန်ထမ်း၏ လစာထဲမှဖြတ်တောက်သောငွေပမာဏသည် […]
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၃
BAS – Business Activity Statement စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ ရှင်းတမ်း တင်ပြခြင်း ယေဘုယျအားဖြင့် အရောင်းအဝယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဆောင်ရွက်ချက်များ ရှင်းတမ်းကို GST နှင့် PAYG အပါအဝင် မိမိတို့ လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းပို့တင်ပြရန်နှင့် အခွန်ဆောင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ အကယ်၍သင်သည် GST အတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက သင်သည် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ ရှင်းတမ်း (Business Activity Statement – BAS) ကို ရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးလတစ်ကြိမ် BAS ကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် GST အတွက် မှတ်ပုံမတင်ပါက အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း စတင်သော ပထမနှစ် သို့မဟုတ် ဒုတိယနှစ်တွင် […]
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခွန်ငွေ – အပိုင်း ၁
လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်ခြင်း သင့်အနေနှင့် မိမိလိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံကိုရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဩစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းငယ်များက အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသော အဓိကရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လေးမျိုးရှိပါသည်။ တကိုယ်ရေ စီးပွားရှင် (sole trader) အစုစပ်လုပ်ငန်း (partnership) ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်း (trust) နှင့် ကုမ္ပဏီ (company) တို့ဖြစ်ကြသည်။ သင်ရွေးချယ်သော ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံသည် အခွန်ဆိုင်ရာ သင်လိုက်နာရမည့်အချက်အလက်များကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါက အခွန်ရေးရာ အကြံပေးသူ တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ATO (Australian Taxation Office) တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 13 28 66 သို့လည်း တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်သည်။ ATO မှ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည့် […]
Uber မောင်းရင် ဘာတွေလိုလဲ? (Tax Related)
မေး။ ။ ကျွန်တော်မှာကားရှိတယ်၊ အားလပ်ချိန်မှာ Uber မောင်းပြီးအပိုဝင်ငွေရှာမလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကြားတာက Uber မောင်းဖို့ ABN ရှိရမယ် GST Registration လုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ABN ကတော့ registration လုပ်ပြီးပါပြီ။ GST တကယ်လုပ်ရမှာလား၊ ဘာတွေအရှုပ်အရှင်းရှိမလဲ? ဖြေ။ ။ Uber driver တွေအားလုံး GST registration လုပ်ရပါမယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် GST registration က တနှစ်ဝင်ငွေ $75,000 ကျော်မှလုပ်ရလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Uber driver တွေကတော့ တနှစ်လုံးမောင်းလို့ ၁ ဒေါ်လာပဲ ဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုရင်တောင် GST register လုပ်ထားရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ATO အရ Uber က Taxi Service […]
Medicare Levy Exemption ရ၊ မရ
ေမး ။ ။ ကၽြန္ေတာ္က Australia ကို 457 visa နဲ႕ေရာက္လာတာပါ။ Medicare Card မရပါဘူး။ ဘာ Medicare Benefit မွမရခဲ့ဘူးပါ။ ဒါေပမယ့္ Tax Return လုပ္ေတာ့ Medicare Levy ေၾကးဆိုၿပီး ေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး အႏႈတ္ခံေနရတာေတြ႕ေနရလို႕ အဲဒါဘာလဲသိခ်င္လို႕ပါ။ ေျဖ ။ ။ Medicare Levy က Australian Citizen ေတြ PR ေတြအတြက္ပါ။ Tax Payer ေတြ ဟာ မိသားစုႏွင့္တကြ Medicare Benefit ခံစားခြင့္ရပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္မွာ မိမိ၀င္ေငြရဲ႕ 2% ကို Medicare Levy အျဖစ္ေပးရပါမယ္၊ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 457 […]